Ganacsiga Iiraan iyo Imaaraadku wuxuu gaaray in ka badan $1.b 5 bilood gudahood - Diblomaasi
Iiraan iyo ganacsiga Imaaraadka ayaa kor u kacay iyada oo ay socoto cunaqabataynta Mareykanka ee Iiraan [Getty]
Madaxa Isu-tagga Imaraadka Carabta (UAE) ee Rugta Ganacsiga Wadajirka ah ayaa shaaca ka qaaday in qiimaha ganacsiga ee labada dal uu kor u dhaafay 1 bilyan oo doolar shantii bilood ee ugu horreysay jadwalka Iiraan oo soconaya 21-ka Maarso illaa 22-ka Ogoosto.
Shantaas bilood gudahood, dhoofinta Iiraan ee UAE waxay ahayd $ 380 milyan waxayna soo dhoofsatey $ 1.07 bilyan sanadkii hore – waxay ku egtahay 20ka Maarso – waxay taagan tahay $ 14.2 bilyan, war bixintaan waxaa sheegay Ururka Horumarinta Ganacsiga Iiraan (TPO).
Farshid Farzanegan, oo ah Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga ee wadajirka ah ee Iiraan iyo UAE ayaa yiri, “sida ku cad heshiisyada iyo saadaasha, mugga ganacsiga labada dal wuxuu gaari doonaa $ 20 bilyan dhammaadka sannad maaliyadeedka 2021-22.”
Wuxuu sii raaciyay: “Dhoofinta beeraha iyo cuntada Iiraan ee Imaaraadka ayaa ah saamaynta ugu yar ee cunaqabateynta iyo faafitaanka coronavirus.”
UAE waa dalka ugu weyn ee wax u dhoofiya Iiraan, waana dalka saddexaad ee ugu badan ee Iiraan wax u dhoofiso, iyadoo UAE ay ka diiwaangashan yihiin 8,000 oo shirkadood oo Iiraaniyiin ah.
In kasta oo Imaaraadka iyo Iiraan ay sii wadaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, haddana waxay hore ugu istaageen dhinacyo iska soo horjeeda oo ku saabsan arrimaha gobolka, oo ay ka mid tahay caadi u yeelidda xiriirkii ay la lahayd Israa’iil halkaas oo Imaaraadku sanadkii hore xiriirka ka sameeyay tallaabadii ay Tehraan cambaareysay.
Imaaraatka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay jabisay cunaqabateyntii Mareykanka uu saaray Iiraan iyadoo si qarsoodi ah u ansixisay iibinta shidaalka Iiraan.
Warbixintii 2019 ee The Wall Street Journal, xeeladaha waxaa ka mid ahaa adeegsiga lacag-bixinnada kaashka ah si looga fogaado raad-raacyada waraaqaha iyo dib-u -habaynta asalka alaabta si loo tirtiro xiriirka labada dal.
Ganacsiyada Iiraan waxay saldhig weyn ku leeyihiin dalka Imaraatka. … Iiraaniyiinta ayaa lagu qiyaasaa inay ku dhawaad 500,000 ku sugan yihiin Isutagga Imaraatka. Ganacsiga u dhexeeya Dubai iyo Iiraan ayaa saddex jibaarmay ilaa $ 12 bilyan intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2009. Dhoofinta Imaaraadka ee Iiraan ayaa afar laab ka badan tan ay ka soo dhoofiso Iiraan.
Related Topics:Ganacsiga Iiraan iyo Imaaraadku wuxuu gaaray in ka badan $1.b 5 bilood gudahood
Wasiirka Batroolka Iiraan Javad Owji ayaa muujiyey hadafkiisa ah in la kordhiyo dhoofinta shidaalka ee Iiraan in kasta oo cunaqabateyntii Mareykanka dib loo soo celiyay 2018.
Iiraan waxay ku tiirsan tahay dhoofinta saliidda inta badan dakhligeeda [Getty]
Wasiirka Batroolka Iiraan Javad Owji ayaa Arbacadii ka sheegay TV -ga dowladda in Iiraan ay hiigsaneyso inay kordhiso dhoofinta shidaalka inkastoo cunaqabateyn Mareykanku saaray iibinta shidaalka Tehraan.
“Waxaa jira rabitaan xooggan oo Iiraan ka jira oo ah in la kordhiyo dhoofinta shidaalka inkasta oo cunaqabateyn caddaalad-darro ah oo sharci-darro ah oo Mareykanku leeyahay,” ayuu yiri Owji.
“Waxaan ballan qaadayaa in waxyaabo wanaagsan ay dhici doonaan oo ku saabsan iibinta shidaalka Iiraan bilaha soo socda,” ayuu raaciyay.
Maadaama uu yahay dal hodan ku ah shidaalka, ilaha dakhligiisuna ugu weyn yahay shidaalka, cunaqabateynta Mareykanka oo uu dib u soo celisay maamulka Trump sanadkii 2015 waxay ka xannibaysaa shirkadaha Mareykanka inay la ganacsadaan Iiraan iyo sidoo kale dalalka kale ee wax ka qabta.
Qiimeynta ku saleysan maraakiibta iyo ilaha kale waxay soo jeedinayaan in dhoofinta saliidda ceyriin ee Iiraan ay hoos uga dhacday 2.8 milyan oo fuusto maalintii 2018 illaa 200,000.
“Iiraan waxay ku laaban doontaa heerkeedii hore ee wax-soo-saarka caydhinta isla marka la qaado cunaqabataynta uu Maraykanku saaray Iiraan,” ayuu yiri Owji.
Wuxuu intaas ku daray: “Waxaan ka soo horjeednaa in shidaalka loo adeegsado aalad siyaasadeed oo wax u dhimi karta suuqa shidaalka”.
Sanadkii la soo dhaafay, Iiraan waxay weydiisatay deyn Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) si ay gacan uga geysato yareynta cadaadiska uu sababay masiibada Covid-19 halkaas oo waddanku uu ka mid yahay kuwa ugu daran ee ku dhuftay Bariga Dhexe.
Mareykanka iyo Iiraan ayaa ku sigtay inay galaan iska horimaad furan 8-dii Janaayo 2020 markii IRGC ay weerarro gantaal ballistic ah ku qaadday laba saldhig oo milateri oo ku yaal Ciraaq oo ay deggen yihiin askar Mareykan ah si ay uga aargutaan dilkii Qaassim Suleymani, oo si toos ah u ahaa Iiraan -Mareykanka.
Xurgufyada ka dhaxeyso Mareykanka iyo Iiraan waxay soo socotay in ka badan 40 sano illaa iyo hadana xal waara lagama gaarin khilafaadka u dhaxeeyo labaddaan wadan. Taliyaha ciidamada khaaska ah ee ilaalada kacaanka Iiraan, Ismaaciil Qaani, ayaa sheegay in “dilka loo geystay taliyihii hore ee ciidankaas, Janaraal Qaasim Suleymaani, uusan Iiraan ka hor istaagi doonin inay sii waddo iska caabbinta”.